News Collection: 'धेरै पढून्, किताबको ज्ञान लिऊन्'
'धेरै पढून्, किताबको ज्ञान लिऊन्'
खाँदबारी (संखुवासभा), पुस ११- 'सेलिब्रेटी पनि पुस्तकालय निर्माणमा!' हिरोइन झरना ब्रजाचार्यलाई पुस्तक र कम्प्युटरसहित ढुंगेधाराको बागेश्वरी उच्च माविमा भेटेपछि खाँदबारी नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत टेककुमार रेग्मी आश्चर्यमा परे। रेग्मीको आश्चर्यप्रति झरनाले खासै आश्चर्य मानिनन्, बरु मुस्काइन् र भनिन्, 'खाँदबारी आकर्षक रहेछ। एकदम रमाइलो लागिरहेछ।' यसअघि रेग्मीले भनेका थिए, 'पर्दामा हेरिएकी र म्यागेजिनमा पढिएकी झरनालाई खाँदबारीमा स्वागत छ!'
लोकसेवा भिड्न रेग्मी टुप्पी कसेर पढ्नेबेला झरना मिस नेपाल भएकी रहिछन्। दस वर्षपछि उनले ती दिन सम्भि्कए। 'त्यस्तै नाइन्टी सेभन- नाइन्टी एट होला हैन?' उनले मुन्टो हल्लाइन् र भनिन्, '९७ हो।' 'मैले तपाईंका कठिन कठिन अन्तरवार्ता पनि हेरेको छु,' एकजना सरकारी अधिकारीको कुरा सुनेर छक्क परिन्। र, यति मात्र भनिन्, 'ए हो!'
संखुवासभाको खाँदबारी-१२ ढुंगेधारास्थित बागेश्वरी उच्च माविमा निर्माण भएको पुस्तकालयलाई पुस्तक हस्तान्तरण गर्न झरना पूर्वी पहाडी जिल्ला संखुवासभा पुगेकी हुन्। 'लोक कल्याणकारी कार्यमा हिँडेको यो नै पहिलोपटक हो,' विद्यार्थी र स्थानीयको भिडमाझ विद्यालयलाई कम्प्युटर र प्रिन्टर हस्तान्तरण कार्यक्रममा उनले भनिन्, 'विद्यार्थीले धेरै पढून् र किताबको ज्ञान आफूमा लिन सकून्।'
मुख्य दलका राजनीतिक प्रतिनिधि तथा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय प्रमुखको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा पुस्तकालय सामग्री हस्तान्तरण गरेपछि झरना विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी तथा शिक्षकसँगको बैठकमा सहभागी भइन्। 'तपाईंहरूले देखाउने सक्रियताले पुस्तकालय प्रयोगको अवस्था निर्धारण गर्छ,' आफ्नै परिवारले सञ्चालन गरेको विद्यालयको अनुभव सुनाउँदै उनले शिक्षकहरूलाई भनिन्, 'त्यसैले पढ्न मन नगर्ने विद्यार्थीबारे पनि सोचिदिनुहोला।'
पुस्तकालय दीर्घकालसम्म चलाउने बाचा गर्ने स्थानीय रामबहादुर तथा मनमाया श्रेष्ठको नाममा पुस्तकालयको नाम 'मनराम पुस्तकालय' चयन गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति सहमत भएको थियो। श्रेष्ठ दम्पतीले वर्षेनी रकम जम्मा गर्ने गरी अक्षय कोष खडा गर्ने घोषणा गरेका छन्। मनमायाले कोषमा जम्मा हुनेगरी ५० हजार रुपैयाँ जिल्ला शिक्षा अधिकारी दीर्घध्वज चापागाईंलाई हस्तान्तरण गरेकी थिइन्।
'यो रकम पत्रपत्रिका तथा नयाँ किताब किन्न प्रयोग गर्नेर्छौं,' जन्मथलोमा पुस्तकालय बनेकोमा प्रसन्न भएका रामबहादुरले भने, 'यसलाई हुर्काउने बढाउन सधैं सहयोग गर्नेछौं।'
ब्लग माइसन्सार डट कममार्फत् पैसा एवं पुस्तक संकलन गरी निर्माण गरिएको पुस्तकालयमा हाल २ हजार २ सय पुस्तक छन्। पुस्तकालयलाई आधुनिक ढंगले व्यवस्थित गर्न कम्प्युटर, फोटोकपी, स्क्यानर सहितको प्रिन्टर पनि प्रदान गरिएको छ।
बिहीबारको साँझ अरुण नदीको पश्चिम भोजपुरको डाँडाभित्र घाम लुक्ने तयारी गर्दै थियो। 'अटोग्राफ प्लिज', फेरि झुल्किए उनै नगर हाकिम टेककुमार। झरनाले डायरीको एउटामा लेखिदिइन्, 'तपाईंको मंगल होस्।'